Ingiriis Grammar Online »Jaamacadda Hodges - Ogolaansho
Categories: Grammar Ingiriis, Luqadda Ingiriisiga, Hodges Connect, Tilmaamaha internetka, Barashada Xirfada iyo Tababar
Ku dadaal barashada koorsooyinka Naxwaha Ingiriisiga ee Khadka Tooska ah ee Hodges Connect!
Ku soo dhowow Barnaamijka Naxwaha Luqadda Ingiriisiga ee Jaamacadda Hodges, nidaam isdaba-joog ah oo lagu fahmayo qaababka naxwaha Ingiriisiga laga soo bilaabo heerarka aasaasiga ilaa heerarka xirfadeed. Barnaamijkeena is-socodka ah ee khadka tooska ah waxaa loogu talagalay si gaar ah dadka waaweyn ee aan ku hadlin Ingiriisiga si ay u fahmaan naxwaha uguna hadlaan Ingiriis si kalsooni leh. Ku kasbo xirfadaha aad ugu baahan tahay magacyada, shaqallada, weedhaha, iyo xayeysiisyada. Xirfadahaani waxay kaa caawin karaan inaad ballaariso awoodda aad ugu adeegsanayso Ingiriisiga si wax ku ool ah oo ula kac ah iyo / ama kordhinta fursadaha dakhli-abuurista!
Koorsadani waxaa loogu talagalay shakhsiyaadka u baahan dabacsanaanta si ay wax uga bartaan khadka tooska ah, ay u helaan taleefan casri ah ama aalad moobil ah, laga yaabee inay ka xishoodaan ama ay ka xishoodaan inay ku wada xiriiraan fasal ama jawi dhex dhexaad ah, iyo / ama doonaya koorso Ingiriis ah oo loogu talagalay inay ku bixiso casharro Ingiriisi ah oo tayo leh qiimo jaban. Bilow Koorsada Naxwaha Ingiriisiga ee Onlineka maanta!
Kani waa koorso aan-shahaado doon ahayn oo lagu bixiyo qayb ka mid ah Hodges wuxuu ku xiraa Barnaamijka Barashada Xirfadaha iyo Tababarka, Halka aan kugula xiriireyno loo shaqeeyaha uu dalbaday xirfado aad u baahan tahay si aad ugu guuleysato.
Raadi Dhammaan Koorsooyinka Naxwaha Ingiriisiga
Raadi Barnaamijyada Isku Xidhka Hodges
Macluumaadka Koorsada Naxwaha Ingiriisiga ee Onlineka ah
Ku Bilow Bilowga: Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Naxwaha Ingiriisiga 1, 2, & 3
Fahmaan sida loo aqoonsado loona isticmaalo magacyada, magac u yaalka, maqaalada, sifooyinka, lahaanshaha, labadaba waqtiyada xaadirka ah iyo waqtigii hore ee Be. Baro sida looga faa'iideysto, su'aalaha loo sameeyo, iyo qandaraas si kor loogu qaado fahamka iyo hadalka ku hadalka.
Laga bilaabo: $ 299
Naxwaha Ingiriisiga 1
Naxwaha Ingiriisiga 2
Naxwaha Ingiriisiga 3
Isdiiwaangeli Bilowga Ingiriisiga
Ku sii wad Heerka Dhexe: Koorsooyinka Onlineka ee Naxwaha Ingiriisiga 4, 5, & 6
Fahmaan sida loo aqoonsado loona isticmaalo xilliyada fudud iyo kuwa horumarka ah waqtigan xaadirka ah, waqtigii la soo dhaafay, iyo mustaqbalka, samee isbarbardhig iyo codsiyo, raadinayana talo iyo oggolaansho Baro sida la isugu daro jumladaha loona isticmaalo ficillo ficil ah iyo qaabab isku xiran si kor loogu qaado fahamka iyo hadalka ku hadalka.
Dhexe: $ 299
Naxwaha Ingiriisiga 4
Naxwaha Ingiriisiga 5
Naxwaha Ingiriisiga 6
Isdiiwaangeli Ingiriisiga Dhexe
Ku dhammee Heerka Sare: Koorsooyinka Onlineka ee Naxwaha Ingiriisiga 7, 8, & 9
Fahmaan sida loo aqoonsado loona isticmaalo dhammaan xilliyada fudud, qumman, iyo kuwa horusocodka, sifooyinka iyo magacyada, cod firfircoon oo dadban, iyo xaalado mala awaal ah. Baro sida loo muujiyo daruuriga, suurtagalnimada, suurtagalnimada, iyo rajooyinka iyo himilooyinka dhammaan xaaladaha iyo xaalado kala duwan. Intaa waxaa sii dheer, wax ka baro laxanka iyo iskuxirnaanta hadalka Ingiriiska si kor loogu qaado fahamka iyo hadalka sifiican.
Sare: $ 299
Naxwaha Ingiriisiga 7
Naxwaha Ingiriisiga 8
Naxwaha Ingiriisiga 9
Isdiiwaangeli Ingiriisiga Sare
Qaado Koorso Khadka Tooska ah oo ku Baraysa Sida Loogu Adeegsado Ingiriisiga Nolosha Dhabta ah.
Soo gal dhammaan 9 koorsooyinka adoo adeegsanaya aaladda mobilada.
Koorso kasta waxay ka kooban tahay Barashada Isdhexgalka, Imtixaanada, Tababbarka ku dhawaaqida, iyo Istaraatiijiyadaha Isticmaalka.
Imtixaan aan xadidnayn.
Koorso ay bixisay Dr. Leisha Cali, Agaasimaha ESL, iyadoo in kabadan 28 sano oo khibrad shaqo ah baraysay Ingiriisiga.
Iibso dhammaan 9 Heerarka Naxwaha Ingiriisiga oo ah $ 795 ama iibso Bilaabasho, Dhexdhexaad, iyo / ama Horumar ah $ 299 midkiiba.
Ha Sugin, Maanta Bilaw!
Saxiix Dhammaan Heerarka Naxwaha Ingiriisiga!
Faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan Dr. Leisha Cali, Agaasimaha Barnaamijka ESL iyo Hodges Online
Dr. Leisha Cali, agaasimaha ESL, waxay la shaqeynaysay jaamacada Hodges ilaa 2004. Waxay haysataa in kabadan 28 sano oo khibrad ah waxayna isku darsatay cilmi baaristeeda iyo khibradeeda wax ku oolka ah ee laga soo baray ardayda inay barato Ingiriisiga oo ah Luuqad Labaad 15kii sano ee la soo dhaafay si ay u gaarsiiso istiraatiijiyado barasho luqadeed. shaqadaas.
Waxay diyaarisay koorsada Naxwaha Ingiriisiga ee Online-ka ah gaar ahaan kuwa laga yaabo inaysan awoodin inay ku booqdaan kambuus shaqsiyeed.
Waa tan waxa aad filan karto.
Iskuday barnaamijyo kale oo marin looga heli karo Taleefanka iyadoo la adeegsanayo aalad kasta oo guurguura.
Koorsooyinka Naxwaha oo loogu talagalay inay ku caawiyaan fahmaan macnaha ka dambeeya erayga hadalka iyo qoraalka.
Way ku caawinaysaa kor u qaad xirfadahaaga wixii ka baxsan badbaadada Ingiriisiga, taasoo caqabad ku noqon karta isdhexgalka qofka iyo bulshada, iyo waliba fursadaha dhaqaale.
Imtixaannadu waxay u dhexeeyaan xulashooyin kala duwan illaa buuxin waxaana la qaadan karaa inta jeer ee ardaygu jecel yahay.
Baro erayo-isdabajoog ah halkii aad ka bixin lahayd eray bixin ballaadhan, taas oo kuu oggolaanaysa inaad si wax ku ool ah ula xiriirto.
Baro siyaabo lagu horumariyo loona dhiso ereybixinta fiidiyowyada Codsiga Casharrada ah cashar kasta.
Wax badan kaga hel lacagtaada shaqada koorsada ee lahjadda, diiqadda, laxanka, iyo laxanka - meelaha inta badan lagu dayaco barnaamijyada dhaqameed iyo khadka tooska ah.
Marka la soo koobo, Jaamacadda Hodges barnaamijkeeda Grammar Online-ka ee Jaamacadda Hodges waxaa loo sameeyay si aad u fahamto sida naxwaha runtii u shaqeeyo oo aad u barato sida loogu hadlo kalsooni!
Majani Lullein, Madaxweyne Kuxigeenka Anchorage Productions Media
“Barnaamijku wuxuu iga caawiyey inaan si kalsooni leh oo raaxo leh ugu gudbo dunida ku hadasha Afka Ingiriiska. La’aanteed, ma awoodi lahayn inaan dhammaystiro waxbarashadayda dalkan. ”